ဖခငျဖွဈသူအတှကျ အိမျအသဈတဈလုံးဝယျပေးလိုကျတဲ့ ဟောလီးဝုဒျမငျးသားကွီး။ – SoShwe
Home/Entertainment/ဖခငျဖွဈသူအတှကျ အိမျအသဈတဈလုံးဝယျပေးလိုကျတဲ့ ဟောလီးဝုဒျမငျးသားကွီး။
ဖခငျဖွဈသူအတှကျ အိမျအသဈတဈလုံးဝယျပေးလိုကျတဲ့ ဟောလီးဝုဒျမငျးသားကွီး။
admin March 6, 2019	Entertainment Leaveacomment
The Rock ဟု လူသိမြားသညျ့ Dwayne Douglas Johnson တဈယောကျ ဖခငျဖွဈသူအတှကျ အိမျအသဈဝယျပေးပွီးနောကျ ခံစားခကျြမြားကောငျးမှနျနကွေောငျး ပွောပွထားသညျ့ ဗီဒီယိုတဈခုကို သူ့ရဲ့အငျစတာဂရမျစာမကျြနှာမှတဈဆငျ့ ပရိသတျမြားကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
အသကျ (၄၆) နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈသူ The Rock က “ကြှနျတေျာ့ အဖနေဲ့ ဖုနျးပွောဖွဈခဲ့တဲ့အကွောငျးတှကေို အခု ပရိသတျတှဆေီ မွနျမွနျဆနျဆနျပဲ ပွောပွခငျြပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပတျ သုံးပတျလောကျက ကြှနျတျော အဖဆေီ့ဖုနျးချေါခဲ့ပွီး အဖေ အခုနတေဲ့အိမျမှာ ပြျောကောငျးပြျောနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော အဖအေ့တှကျ တဈခုခု လုပျပေးခငျြတယျဗြာ။ အဖနေခေငျြတဲ့နရော အဖနေနေိုငျတဲ့နရောမှာ အိမျအသဈတဈလုံးကို ကြှနျတျော ဝယျပေးခငျြပါတယျ ဆိုပွီးပွောခဲ့ပါတယျ။” ဟူ၍ သူ့ရဲ့ ဗီဒီယို၌ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဆကျလကျပွီးတော့လညျး The Rock က “သူက ကြှနျတျော ပွောတာကို မယုံနိုငျခဲ့ဘူးဗြ။ သူ့မှာ ပွောစရာစကားတောငျမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောသူ့ကို ပိတျရကျမှာ ချေါသှားပွီး အိမျကိုလိုကျပွခဲ့ပါတယျ။ သူက ဖလျောရီဒါမွို့မှာ ကွီးပွငျးခဲ့တဲ့သူတဈယောကျပါ။ အခုဆိုသူက ဖလျောရီဒါမွောကျပိုငျးမှာ ငါအရမျး စိတျလှုပျရှားနပွေီး ပြျောရှငျနပွေီကှာဆိုပွီးပွောပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့အဖကေ ရှေးရိုးဆနျတဲ့လူဗြ။ ကြှနျတျောက ပွောတယျ။ အဖဘောလို့ ဒီလောကျ စိတျလှုပျရှားနရေတာလဲလို့ပေါ့။ ကြှနျတျောအဲ့ဒီလိုမေးတော့ အဖကေ သူဘာပွောရမလဲဆိုပွီး စကားလုံးတှေ ရှာနသေေးတယျဗြ။ ပွီးတော့မှ ငါ့ကို အရငျက ဒီလိုမြိုး အိမျအသဈဝယျဖို့ဆိုပွီး ချေါပွတာ ဘယျသူမှ မရှိခဲ့ဖူးဘူးကှ။ ဒါပမေယျ့ အခုအဲ့ဒီလို ပထမဆုံး ချေါပွတဲ့သူက ငါ့သားဆိုတဲ့ မငျးဖွဈနတော ငါအရမျးဂုဏျယူရတယျကှာ။ မငျးကိုလညျး အရမျးခဈြတယျကှာဆိုပွီး ကြှနျတေျာ့ကို ပွောတယျဗြ။”
“ကြှနျတေျာ့အဖေ ဒီလိုပွောတာကို ကြှနျတျော အရငျက တဈခါမှမကွားဖူးခဲ့ပါဘူး။ အခု ဒီလိုစကားကွားရတာက ကြှနျတေျာ့အတှကျ အရမျးကောငျးပွီး ဒီစကားတှကေ ကြှနျတေျာ့နှလုံးသားအထိ ရောကျသှားပါတယျ။ ခငျဗြားတို့သိလား။ ကြှနျတေျာ့အဖကေ ကြှနျတေျာ့တငျပါးကို အမွဲလိုလို အပြျောသဘောနဲ့ ခဈြခငျတဲ့သဘောနဲ့ ကနျနကေဖြွဈပွီး ကြှနျတျော ဒါကို အရငျက မုနျးခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုတော့ ဒီလိုကနျတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောကြေးဇူးတငျနပေါပွီ။ ကြှနျတေျာ့ကို ဒီလိုအကွငျနာတရားတှေ ပေးစှမျးခဲ့တဲ့သူကို အခုလိုပွနျပွီး လုပျပေးခှငျ့ရခဲ့တဲ့အတှကျလညျး ကြှနျတျော အရမျးပြျောရှငျနပေါတယျ။ ကြှနျတျော အဖကေို့ အရမျးခဈြပါတယျ။” ဆိုပွီး ပွောထားတဲ့ ဗီဒီယိုကို သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှထေံ The Rock က ဝမြှေပေးသှားခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ဖခင်ဖြစ်သူအတွက် အိမ်အသစ်တစ်လုံးဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ ဟောလီးဝုဒ်မင်းသားကြီး။
The Rock ဟု လူသိများသည့် Dwayne Douglas Johnson တစ်ယောက် ဖခင်ဖြစ်သူအတွက် အိမ်အသစ်ဝယ်ပေးပြီးနောက် ခံစားချက်များကောင်းမွန်နေကြောင်း ပြောပြထားသည့် ဗီဒီယိုတစ်ခုကို သူ့ရဲ့အင်စတာဂရမ်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ပရိသတ်များကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
အသက် (၄၆) နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ The Rock က “ကျွန်တော့် အဖေနဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကို အခု ပရိသတ်တွေဆီ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ ပြောပြချင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ် သုံးပတ်လောက်က ကျွန်တော် အဖေ့ဆီဖုန်းခေါ်ခဲ့ပြီး အဖေ အခုနေတဲ့အိမ်မှာ ပျော်ကောင်းပျော်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အဖေ့အတွက် တစ်ခုခု လုပ်ပေးချင်တယ်ဗျာ။ အဖေနေချင်တဲ့နေရာ အဖေနေနိုင်တဲ့နေရာမှာ အိမ်အသစ်တစ်လုံးကို ကျွန်တော် ဝယ်ပေးချင်ပါတယ် ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။” ဟူ၍ သူ့ရဲ့ ဗီဒီယို၌ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း The Rock က “သူက ကျွန်တော် ပြောတာကို မယုံနိုင်ခဲ့ဘူးဗျ။ သူ့မှာ ပြောစရာစကားတောင်မရှိပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်သူ့ကို ပိတ်ရက်မှာ ခေါ်သွားပြီး အိမ်ကိုလိုက်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူက ဖလော်ရီဒါမြို့မှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အခုဆိုသူက ဖလော်ရီဒါမြောက်ပိုင်းမှာ ငါအရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီး ပျော်ရွှင်နေပြီကွာဆိုပြီးပြောပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေက ရှေးရိုးဆန်တဲ့လူဗျ။ ကျွန်တော်က ပြောတယ်။ အဖေဘာလို့ ဒီလောက် စိတ်လှုပ်ရှားနေရတာလဲလို့ပေါ့။ ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမေးတော့ အဖေက သူဘာပြောရမလဲဆိုပြီး စကားလုံးတွေ ရှာနေသေးတယ်ဗျ။ ပြီးတော့မှ ငါ့ကို အရင်က ဒီလိုမျိုး အိမ်အသစ်ဝယ်ဖို့ဆိုပြီး ခေါ်ပြတာ ဘယ်သူမှ မရှိခဲ့ဖူးဘူးကွ။ ဒါပေမယ့် အခုအဲ့ဒီလို ပထမဆုံး ခေါ်ပြတဲ့သူက ငါ့သားဆိုတဲ့ မင်းဖြစ်နေတာ ငါအရမ်းဂုဏ်ယူရတယ်ကွာ။ မင်းကိုလည်း အရမ်းချစ်တယ်ကွာဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်ဗျ။”
“ကျွန်တော့်အဖေ ဒီလိုပြောတာကို ကျွန်တော် အရင်က တစ်ခါမှမကြားဖူးခဲ့ပါဘူး။ အခု ဒီလိုစကားကြားရတာက ကျွန်တော့်အတွက် အရမ်းကောင်းပြီး ဒီစကားတွေက ကျွန်တော့်နှလုံးသားအထိ ရောက်သွားပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့သိလား။ ကျွန်တော့်အဖေက ကျွန်တော့်တင်ပါးကို အမြဲလိုလို အပျော်သဘောနဲ့ ချစ်ခင်တဲ့သဘောနဲ့ ကန်နေကျဖြစ်ပြီး ကျွန်တော် ဒါကို အရင်က မုန်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဒီလိုကန်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်နေပါပြီ။ ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုအကြင်နာတရားတွေ ပေးစွမ်းခဲ့တဲ့သူကို အခုလိုပြန်ပြီး လုပ်ပေးခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ကျွန်တော် အရမ်းပျော်ရွှင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် အဖေ့ကို အရမ်းချစ်ပါတယ်။” ဆိုပြီး ပြောထားတဲ့ ဗီဒီယိုကို သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေထံ The Rock က ဝေမျှပေးသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Previous Aquaman2ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရုံတင်ပြသမည့်အချိန်အား တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာ။
Next ????????????????????? ????????????? ????????????????????? ?????????????????????